I-Studio Bonjour-Ukubalekela ezilalini ezolileyo
Umzuzu omnye ukusuka kuhola wendlela, iStudio Bonjour sisitudiyo esihle esinezinto esiziphetheyo esinekhitshi elikwifama encinci enemibono emangalisayo yeMt Spokane. Imizuzu ukusuka eSpokane, amachibi amahle, iindlela zokuhamba intaba kunye nemidlalo yangaphandle. Eli khaya yifama encinci esebenzayo enamahashe ambalwa, iinkukhu, amadada kunye nenja yethu yasefama enobuhlobo. Isitudiyo sifakwe iintsholongwane ngononophelo. Ukuhamba kude eluntwini kuyahlonitshwa. Yabucala kwaye yangasese.
Ukubhukisha amahashe kunye noluhlu olukhulu olukhoyo, qhagamshelana ngolwazi oluthe kratya.
Esi sisitudiyo sabucala esinomnyango waso esinokulala ezine kunye nebhedi ekhululekileyo yokumkanikazi kunye nesofa eguqukayo. Ikhitshi ibandakanya yonke into oyifunayo ukupheka okulula ngexesha lokuhlala kwakho. Indlu yethu ihlala kwiihektare ezi-5 apho amahashe ethu, iinkukhu kunye namadada ahambahamba (ukukhwela ihashe ngexesha lokuhlala kwakho kunokulungiswa). Sinemibono engathintelwanga yeMount Spokane kunye neentaba ezingqongileyo zaseSelkirk. Uhola wendlela ophambili waseMntla-Mzantsi ungaphantsi komzuzu, kodwa ukude ngokwaneleyo ukuphepha ingxolo.
Sisemaphandleni kunye nabo bonke abamelwane abaneepropati ezinkulu kunye/okanye umhlaba weefama. Izilwanyana zasendle ezininzi (izagwityi zaseCalifornia, iiturkeys zasendle kunye nexhama zibonwa rhoqo, ngamanye amaxesha amaxhalanga anempandla). Indawo ezolileyo efanelekileyo yokuphumla okanye ukuhambahamba kwindawo ehlala kuyo. Iimbono ezimangalisayo nezisoloko zitshintsha kwiintaba zeSelkirk kunye neyona Ntaba iSpokane iphawuleka ngasemva kwamadlelo ethu.
Kancinci okanye kangangoko ufuna.